Ny lanjan'ireo fihetsiky ny mpitsidika | Martech Zone
Ny lanjan'ireo fihetsiky ny mpitsidika
Alahady Oktobra 24, 2010 Alatsinainy Desambra 15, 2014 Douglas Karr
Mandrefy zavatra betsaka isika amin'ny Analytics, fa matetika tsy manome lanja ny hetsika tsirairay ataon'ny mpitsidika rehefa mifandray aminay amin'ny Internet izy ireo. Zava-dehibe ny handinihan'ny orinasa mihoatra ny fitsidihana sy fiovam-po… misy taonina ny fifandraisana eo anelanelan'ny sy aorian'izay manome lanja.
Ao amin'ny tabilao etsy ambony dia manana axis roa aho… ny fiatraikany sy ny sandany. Amin'ny maha mpitsidika anao toy ny, bitsika, mpankafy ary manaraka ianao na ny orinasanao… misy ny fiatraikany, tsy hoe fotsiny satria mety ho akaiky hividy ilay mpitsidika, fa noho izy ireo nanamafy ny fikasan'izy ireo sy ny fankatoavany ireo tambajotran'izy ireo. izy ireo tsy mety na dia manao fividianana aza, fa raha manana fitaomana betsaka izy ireo, ny fitaomany dia mety hanosika olona maro hafa hividy.
Ny hetsika hafa ataon'ny mpitsidika anao dia manan-danja ihany koa… ny fisoratana anarana amin'ny mailaka na RSS, webinar iray, miantso ny departemantan'ny varotrao… ireo rehetra ireo dia hetsika manetsika ny vinavina ho lasa mpanjifa. Ireo orinasa manana programa mandeha ho azy izay manome fanamarihana ho an'ireo mpiantsena izay mandao ny sarety fiantsenany dia mahatakatra ny maha-sarobidy an'io fizarana io. Satria efa akaiky dia akaiky ny fividianana izy ireo dia mety mila fanindriana kely fotsiny na fampahatsiahivana… na koa fotoana hanangonana ny vola ilaina hanaovana ilay fividianana.
Aorian'ny fividianana na fanavaozana tena izy dia misy hetsika hafa izay mampitombo ny fiantraikan'ny varotra - naoty na fanekena ny vokatra novidina. Ny isa dia misy fiatraikany matanjaka amin'ny fanatanterahana vidy na tsia. Ny fanamafisana manokana na famerenana ny vokatra mavesatra kokoa aza.
Rehefa mamolavola ny paikadim-barotra amin'ny Internet ianao, aza hadino ny manara-maso ny hetsika tsirairay mety hataon'ny mpitsidika. Omeo fampielezan-kevitra sy fanentanana amin'ny dokam-barotra hialana amin'izy ireo amin'ny hetsika iray amin'ny fomba mahomby. Matetika ny fanantenana dia miala amin'ny tranokalanao ary very ny varotrao satria tsy mazava ny fomba nifindrany tamin'ny hetsika iray mankany amin'ny manaraka amin'ny tranokalanao. Omeo lalana mazava hifaneraseran'ny mpitsidika anao. Omeo làlana marobe mba hahitana vokatra tsara kokoa.
Tags: sarobidyhetsika ataon'ny mpitsidikafitondran-tenan'ny mpitsidikasandan'ny mpitsidika
Tsy misy teny fiderana tsara noho ity!
Vonona, Afo, Tanjona